चीनसँगको बिआरआई सम्झौताको पनि वहस गर्ने समय आएको - Online Janata
सरकारलाई बालेनको च्यालेन्ज आईतवार शनिबार २ दिन बिदा हुँदैन । हुन्छ…
प्रतापपुर गाउँपालिकामा नेपाली काग्रेंस विजयी
स्थानीय निर्वाचन २०७९, कहाँ कसले जित्याे ? कसकाे कब्जा कसले भत्कायाे…
ड्रग्स सहित भारतमा नेपाली पक्राउ
प्रतापपुर वडा नं.६ मा केशव अधिकारी निर्वाचित
प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको संयुक्त प्रार्थना
चीनसँगको बिआरआई सम्झौताको पनि वहस गर्ने समय आएको
युवा नेताको विकासवादी सोच
खुला सिमाको स्वरुप बदल्ने बेला आएको हो कि ?
नेपाल-चीनको कुटनीतिक प्रभाव
चिनले ठुलो उद्योगलाई दिन दिनै कार्यवाही गर्दैछ । के छ उद्देश्य…
भारतको डेलनेट र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
प्रतापपुरमा खेलकुद प्रतियाेगिता
वडा अध्यक्ष भगवन्तलाल गुप्ताद्वारा विध्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
देवचुलीमा बालमैत्री स्थानीय शासनबारे अभिमुखिकरण
मर्चवार क्षेत्रमा २० लाखकाे भवनकाे शिलान्यास
लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने
भारतीय वायु सेनाको विमान भैरहवा विमानस्थलमा, फाेटाेफिचर …..
सीमा विवादमा राजनीति नगरौं, नेपाल संगको सम्बन्ध अटूट छ : भारत
मेलाको आय व्यय सार्वजनिक
जसपा काे होली मिलन समारोह
काेराेनाकाे कारण राेकिएकाे औद्योगिक व्यापार मेला शुरू
बिहारकी अभिनेत्रि मौनी रोय दुबईका व्यापारीसँग इटालीमा बिहे गर्दै
सेमरी इप्रकामा चितुवाकाे पाेष्टमार्टम
युरोप र चीनमा बढ्दै कोरोना संक्रमण, नेपाल र भारतमा सतर्कता
पराग अग्रवाल बने ट्विटरका नयाँ सीईओ
कोरोनासँगको लडाइमा सेरमका पुनवालाको साहस
मुक्तिनाथमा खचाखच पर्यटक
रमजान महिना आजदेखी शुरु
परासीमा शनिवार हिन्दु राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान कार्यक्रम
सांसद रौनियारद्वारा होलीको अवसरमा शुभकामना संदेश
तेली समाज पर्साको होली मिलन
हिन्दु राष्ट्र स्वाभिमान अभियानको ‘साहित्य परिचय’ कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न
नेपाली लेखक संघको तदर्थ समिती गठन
राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता
एमसीसी पास हुने वित्तिकै फेसबुकमा मैले स्टाटस लेखेको थिए, ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ । म अत्यन्तै खुशी छु । वास्तावमा एमसीसी अनुमोदन भएको भन्दा बढि नेपाल राष्ट्र एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट देशद्धारा रक्षित र संरक्षित मुलुक नभएको प्रमाणित भएकोमा बहुतै खुशी छु ।’ र, म वास्तवमै यो कारणले खुशी छु ।
एमसीसीको कार्यान्वयनमा वास्तवमै नसोचेको चुनौतिहरु छन् । महान राष्ट्रवादीहरुले टावर भत्काउने, यस्तै कार्यमा उफ्रिन सक्छ । एमसीसीको ‘क्लजेज’हरु सहि ढंगबाट कार्यान्वयन गरेर नेपाल सरकारले त्यही अनुसार समन्वय गरेमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशा गर्न सक्छौँ ।
सुरुवाती चरणदेखि नै म एमसीसीको पक्षमा कठोरताका साथ उभिनुका कारणहरु छन् । एमसीसीको साठी अर्ब लिनुपर्छ भन्दा पनि हामी समाजवाद उन्मुख भएकोले संविधान मिचिन्छ । यसकारण एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने कुराले मनमा एकदम चिसो लागेको थियो ।
समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवाद भइसकेको हो र ? हाम्रो संविधानले समाजवाद बनाई सकेको हो र ? समाजवाद उन्मुख भनेको हामीले अर्थतन्त्रलाई ठ्याम्मै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको हो र ?
हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित समाजवाद उन्मुख भनेको छ । समाजवादलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न बाँकी नै छ । तर यो एकदम दीर्घकालीन समस्या हो । ठूला वर्गले साना वर्गलाई तहसम्मकालाई ‘हामी लगभग अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ’ भन्ने जस्ता नाटकको विकास गरेको छ ।
शुशील कोइरालालाई आज असाध्यै सम्झिन्छु । उँहाले जिद्दि गरेर, हठ गरेर बहुलवाद ल्याउनु भयो । अखिर किन ल्याउनुभएको रहेछ, अहिले बुझ्दै छु । संविधानमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको समाजवाद भनेको छ । समाजवाद उन्मुखलाई नै परिभाषित गर्न बाँकी नै छ ।
सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिइ प्रतिस्पर्धालाई खुल्ला गर भनेको छ । मेरो व्यक्तिगत धाराणामा राजनीतिक रुपमा एउटै आइडियोलोजी हुनुपर्ने भए सामाजवाद लेख्नु नै गल्ती हो । किनकी लोकतान्त्रिक संविधानले कुनै वादलाई च्याप्न मिल्दैन । सबैलाई आफ्नो भनाइ वा विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ ।
अहिले भन्दापनि अगाडिदेखी हाम्रो सामु आएको अर्को अजीवको ‘असंलग्नता’ हो । यो असंलग्नता भनेको के हो ? मेलै बुझेको अनुसार असंलग्नता भनेको कुनै सैन्य गतिविधिमा नलाग्ने भनेको हो । तर विस्तारै विस्तारै के विकास भएको छ भने साम्यवादहरुको पक्ष लियो भने असंलग्न र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको पक्ष लियो असंग्लनता छोड्यो भन्ने नाटकीयपनको विकास गरेको छ ।
वास्तावमा वैचारिक रुपमा जो जहाँ पनि संलग्न हुन पाउँछ । हाम्रोमा अलिकति पनि प्रजातान्त्रिक पक्षमा उभियो भनेपनि असंलग्नता छाड्यो भन्ने बुझाई छ । र एकपक्षीय व्यक्तिहरु यसलाई राम्रो हो, सत्य हो भनेर लागेका छन् । यो तल्लो तहसम्म नै जरो गाडेको छ । यसकारण यो दुई वटा कुरामा राम्रो ढंगले योजना बनाइ यो लोकतान्त्रिक बहुलबादी मुुलुक हो । समाजवाद भनेको यस्तो होइन । असंलग्नतामा यस्तो हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
उदाहरणको लागी पोखरा विमानस्थलको दुई प्रतिशत दरमा चीनलाई ऋणको व्याज बर्षको चालिस करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नागढुंगा प्रोजेक्टमा लगभग २० अर्ब बराबरमा ० दशमलव १ प्रतिशतका दरले जापानलाई दुई करोड मात्रै व्याज तिर्नुपर्छ । यी दुईबीच २० गुणाको फरक देखिन्छ । पोखरा विमानस्थलको अपरेशनबाट चालिस करोड व्याज तिर्न सक्नेगरी ‘यू टर्न’ हुन्छ की हुन्न थाहा छैन । तर चीनको भएर त्यसमा कोही बोलेमा अराष्ट्रिय भइन्छ भन्ने छ ।
एमसीसीको वहसले एउटा राम्रो काम गरेको छ । अब चीनसँगको बिआरआई सम्झौताको पनि वहस गर्ने समय आएको छ । बीआरआईमा के–के छ यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । सबैले यसको बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ ।
सुनेको अनुसार २७ खर्बको ऋणमा ८ प्रतिशत व्याजदर तिरेर रेल ल्याउनु पर्ने की नपर्ने कत्तिको आवश्यक हो ? आर्थिक रुपमा फिजिबल छ की छैन ? यो प्रश्नहरु गर्न पाइने हो की होइन ? कम्प्याक्ट सम्झौतामा जहाँ जहाँ अमेरिका लेखिएको छ, त्यसको ठाँउमा चीन लेखोस् र चीनबाट एक बिलिएन डलर, तीन बिलिएन डलर ल्याओस् ।
चीनले हामीलाई जे गरे पनि हुने ? यसमा विरोध पनि नहुने ? चीन हाम्रो ग्राम देवता, इष्ट देवता हो र ? एमसीसीको यत्रो विरोध जुलुुस भइरहँदा यसलाई सारेर हटाइदिने हो भने त नेपाल चीनको ‘मोनोपोली ल्याण्ड’ हुन्थ्यो । म चीन विरोधी होइन ।
र, राष्ट्रवादी पनि होइन म एक देश भक्त हँु । साँच्चै नै देशको हित चाहन्छु । अब नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तिहरुले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ । साभार
(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा विषयमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंशः)
प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो
Previous articleकम्युनिष्टले ध्वस्त पारेको नेपालको छवि देउवाले एकै झट्कामा सपारे
Next articleबिजुलीको तारबाट सेना कसरी आउँछन ? : गृहमन्त्री खाड
सरकारलाई बालेनको च्यालेन्ज आईतवार शनिबार २ दिन बिदा हुँदैन । हुन्छ त १ दिन
स्थानीय निर्वाचन २०७९, कहाँ कसले जित्याे ? कसकाे कब्जा कसले भत्कायाे ? विस्तारमा …..
Pratappur Gaupalika matgadana
सरकारलाई बालेनको च्यालेन्ज आईतवार शनिबार २ दिन बिदा हुँदैन । हुन्छ...
स्थानीय निर्वाचन २०७९, कहाँ कसले जित्याे ? कसकाे कब्जा कसले भत्कायाे...
जेष्ठ ४, २०७९
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णमा गम्भीर त्रुटि, वाइडबडी जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने
बैशाख १६, २०७९
चीनकाे श्रीलंका जस्तै नेपाललाइ पनि महंगाेमा ऋण भिडाउने प्रयास जारी￼
चैत्र १४, २०७८
बुटवल नारायणगढ सडक – नवलपुरमा १२.४४ प्रतिशत मात्र काम
फाल्गुन २३, २०७८
नवलपरासीमा भारतीय नागरिककाे रहस्यमय मृत्यू
फाल्गुन १२, २०७८
प्रतापपुरमा अध्यक्ष पदमा करम हुसेन र अन्जु चौधरीको उम्मेदवारी
प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि कुन पार्टीबाट कसकाे चर्चा…?
© Onlinejanata | Maintained by Prakash Kushwaha | WeblinkNp
Brijraj Kushwaha - जेष्ठ ७, २०७९ 0